ေဗဒင္ Archives - Latest Myanmar News
အဓိပ္ပါယ် ပြည့်ဝသော လက်ဖဝါးပြင်ပေါ်မှ ထူးခြားအမှတ်အသား (၉) မျိုး အလွန် ထူးဆန်းသော သဘာဝ အင်အားတို့သည် လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သီးသန့်ရှင်သန်လျှက်ရှိရာ ထိုအစွမ်းတို့၏ အံ့ဖွယ်ရာ သတ္တိထူးတို့က လက္ခဏာရှင်ကို စိုးမိုးလျှက်ရှိကြသည်။ ထို့စွမ်းအင်တို့၏ အမှတ်အသားကို လက်ဖဝါးပြင်တွင် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနပြုရာတွင် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး လက္ခဏာရှင်ကို ရာနှုံန်းပြည့် ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်ကိုပေးသော အထူးအမှတ်အသားများ ဖြစ်ပေါ် လာပေသည်။ ထိုအမှတ်အသားများစွာထဲမှာ အလွန်အတွေ့များပြီး အမှန်တစ်ကယ်လည်း လူတစ်ယောက်၏ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ကို ဖန်တီးသော လက်ဖဝါးပြင်မှာ ထူးခြားသော အမှတ်အသား (၉) မျိုးအကြောင်းကို စာရှည်မည်စိုးသဖြင့် အနှစ်ချုပ် တင်ပြလိုပါသည်။ ထူးခြားအမှတ်အသား (၉) မျိုးကတော့… ၁။အစက်ကလေးများ ၂။စက်ဝိုင်းများ ၃။ကျွန်းသဏ္ဍာန် ၄။လေးထောင့်အမှတ်အသား ၅။သုံးထောင့် အမှတ်အသား ၆။ကြက်ခြေ အမှတ်အသား … Read more
တသက်တာ ယတြာချေနည်းလေး ဗေဒင်လက္ခဏာ မေးပြီး ယ တြာ ချေရန်ငွေကြေးအခက် အခဲရှိသူများအတွက်အလွယ်ကူဆုံးတသက်သာ ယတြာ ချေနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မွေးသက္ကရာဇ် ကိုတည်ပါ ရောက်ဆဲ သက္ကရာဇ်ဖြင့်ပေါင်းပါ ပေါင်းရကိန်းကို (၃) နှင့်မြှောက်ပြီး မြှောက်ရကိန်းကို (၇) နှင့်စားပါလေအကြွင်းကို အောက်ပါ လင်္ကာအတိုင် ယတြာချေရန်ဖြစ်ပါသည်။ မီး ၊ ရွှေ ၊ စိုး ၊ ငါး ၊ သံဃာအား ကျွေးငြား ဆွမ်းကိုသာ ၊ ယာယီမမေ့ ၊ အမြန်ရွှေ. ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ (၁) ကြွင်းပါက ဆီမီသက်စေ့ ပူဇော်ရပါမည်။ (၂) ကြွင်းပါက ဘုရားတွင် ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူ ပူဇော်ရပါမည်။ (၃) ကြွင်းပါက ရုက္ခစိုးနတ်အား ပူဇော်ပသရပါမည်။ (၄) ကြွင်းပါက … Read more
June 22, 2021 by Latest Myanmar News
ပိုက်ဆံချေးပြီး ဆုံးမလိုဖြစ်နေလျှင်(ရစရာငွေရှိနေလျှင်) ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် စိတ်သောက ရောက်နေလား ချေးထားသူမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ ပြန်မပေးပဲ ကြန့်ကြာအောင်အချိန်ဆွဲနေလား ရစရာရှိသူ ငွေချေးထားသည့် ငွေရှင်သည် တနင်္ဂနွေသားသမီး ဖြစ်ပါက မွေးနေ့ နေ့လည် (၁၂)နာရီ မှ (၁)ခွဲအတွင်း အိမ်ဘုရား၌ ကံကော် ၂ ညွန့် အမွေးတိုင် (၃) တိုင် ဖယောင်းတိုင် (၃) တိုင် လှူပါ။ ထိုနောက် လက်ဝါးတွင် ငွေချေးသူ၏အမည်ကိုရေးပါ။ နှမ်းဆီ တစ်စက်လက်ဖဝါးတွင်ပွတ်ပါ။ ငွေ တစ်ထောင်တန် တစ်ရွက် လက်ဝါးထဲထည့်လက်နှစ်ဖက်နှင့်ရိုက်ပြီး “(နေ့သမီး…..မ …….) ငါ့ငွေ ငါ့ထံလာပေးစေ” ပြောပေးရမည် ။ ပြီးလျှင် လက်ဝါးနှစ်ဘက်ကို မီးပူဇော်ထားသည့် ဖယောင်းတိုင်မီးနှင့် နွေးနွေးကင်ပြီးလက်ခုပ် (၆)ချပ်တီး လိုရာဆန္ဒများအသေအချာတောင်းပါ။ ထွန်းထားသည့် အမွေးတိုင်တိုင် ဒုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းကို … Read more
နယုန်လအတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ( နယုန်လဆန်း(၁)ရက်နေ့ (10.6.2021) မှ (8.7.2021)အထိ)
နယုန်လအတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ နယုန်လဆန်း(၁)ရက်နေ့ (10.6.2021) မှ နယုန်လကွယ်နေ့(8.7.2021)အထိတစ်လတာလုံး “​‌‌လစ်ပို ပုလင်းအလွတ်ထဲတွင် ရေသန့်ဖြည့်ထားရမည်။ အုန်းညွန့်(၆)ညွန့်ကို ထိုလစ်ပိုပုလင်းထဲတွင်ထည့်ပါ။ ကြွေပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ပေါ်တွင် အုန်းညွန့်စိုက်ထည့် ထားပြီးသား လစ်ပိုပုလင်းကို တင်ပြီး ထိုပုလင်း၏ ဘေးပတ်ပတ်လည် တစ်ဝိုက်တွင် ပေါက်ပေါက်ပွင့် အနည်းငယ် ဝိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ယခုအစီအရင်ကို မိမိအိမ်ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှိ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ရိုသေစွာဖြင့် လှူဒါန်း ပေးထားရပါမယ်ခင်ဗျ…..။ ယခုလတစ်လတာတွင် #လိမ္မော်ရည် တစ်ခွက်စီ နေ့စဥ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ကပ်လှူပေးနေခြင်းဖြင့် မိမိအတွက်ထူးခြားမှူဖြစ်စဥ်များကောင်းကျိုးများစွာ ကိုလည်း ရရှိခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ကံချေကန်တော့ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ရန် မမေ့ပါနှင့်။ နေ့စဥ်အောက်ဖော်ပြပါဂုဏ်တော်များကိုရွတ်ဖတ်ပါ။ ဣတိပိသောဘဂဝါ လောကဝိဒူ=၁၉ခေါက် ဣတိပိသောဘဂဝါ ဗုဒ္ဓေါ=၆ခေါက် ဣတိပိသောဘဂဝါ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော=၁၇ခေါက် နယုန်လအတွက်နေ့စဥ်လာဘ်ပွင့်အရပ်မျက်နှာများ တနင်္ဂနွေနေ့=မြောက်အရပ် တနင်္လာနေ့=တောင်အရပ် အင်္ဂါနေ့=အရှေ့အရပ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့=အနောက်အရပ် ကြာသပတေးနေ့=အရှေ့အရပ် သောကြာနေ့=မြောက်အရပ် စနေနေ့=တောင်အရပ် အထက်ပါအတိုင်းနေ့အလိုက်နေ့စဥ်အရပ်မျက်နှာမူ ဧဟိလာဘံ ဟူ၍(၂၇)ခေါက်တိတိရွတ်ပေးရပါမည်။ … Read more
Categories ေဗဒင္ Tags နယုန်လ
Categories ေဗဒင္ Tags ရောင်းပန်
ဇွန်လအတွင်း စနေသားသမီးများအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
ဇွန်လအတွင်း စနေသားသမီးများအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း စီးပွားရေး၊ လူမူရေး ။ ။ ဒီတစ်လအတွင်း လုပ်ငန်းထဲတွင် ကိုယ်လုပ်သလောက်၊ ကိုင်သလောက် ကိုယ်ကြိုးစားသလောက် ဘာတစ်ခုမှ အဆင်ပြေမှု အားကျမှု ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။ အဝေးဒေသမှ လူမျိုးကွဲ (သို့) တိုင်းရင်းသားများနှင့် အဆက်အသွယ်ကောင်း ရရှိမည်။ အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင်တွေကို အနိုင်ရမည်။ အိမ်ထောင်ရေး၊ အချစ်ရေး ။ ။ အိမ်ထောင်ဘက်ကြောင့် စိတ်ရှုပ်ရမည်။ အိမ်ထောင်ရေး သုခ အသင့်တင့်သာရှိမည်။ ငယ်ရွယ်သူများ ချစ်သူကြောင့် စိတ်သောက ရောက်မည်။ စိတ်ညစ်မည်။ အချစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဆင်မပြေတပြေဖြစ်မည်။ ပညာရေး ။ ။ ပညာရေး အထူးကံကောင်းမည်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ပညာရေးမှာ အတွေးသစ်တွေ ရရှိပြီး တိုးတက်လာမည်။ ကျန်းမာရေး ။ … Read more
Categories ေဗဒင္ Tags ဇွန်လ
တနင်္လာနေ့တိုင်းအတွက်အထူးလာဘ်ပွင့်ယတြာ ငွေကြေးအခက်အခဲများကို ကြီးကြီးမားမား ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနေရပြီး အခက်တွေ့နေရတဲ့ ၇ရက်သားသမီး အပေါင်းတို့အတွက် ရည်ရွယ်၍ တင်ပေးရခြင်းပါ။ မိမိကိုယ်တိုင် ငွေကြေး‌ ငွေပူ ကြွေးမြှီး ကိစ္စ ပြဿနာ ကြုံ‌တွေ့နေရခြင်းဖြစ်စေ၊မိသားစုအတွင်း စီးပွားရေး မပြေလည်ဖြစ်ကာ ငွေကြေးခက်ခဲမှု နွံထဲကျဆင်းနေကြခြင်းကြောင်း ဖြစ်စေ ယခုအထူးယတြာကို တနင်္လာနေ့တိုင်း သတိတရ နှင့် လုပ်ဆောင်ပေးနေကာ အပူအပင်ကင်း၍ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရယူပါဗျ။ သင်္ဘောသီးမှည့်တစ်လုံးကို အလယ်မှ တစ်ခြမ်း လှီးခြမ်းလိုက်ပါ။ ထိုသင်္ဘောသီးထဲမှ ‌အစေ့များကိုထုတ်ယူပြီး သေချာ ရေဆေး သန့်စင် ပေးလိုက်ပါ။ ထိုသင်္ဘောခြမ်း တစ်ခုထဲ၌ #ထန်းလျက်၁၁ခဲ ကို ထည့်ရပါမည်။ အထက်ပါစီရင်ပြီးသားအတိုင်းကို ကြွေပန်းကန်ပြား တစ်ချပ်ပေါ်တွင် တင်ထား၍ ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှိ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ရိုသေစွာ ကပ်လှူ ပေးရမည်ဖြစ်သည်……။ ယတြာပြုလုပ်ရမည့် … Read more
အပြိုင်အဆိုင်ကိုနိုင်၍ လာဘ်ရွှင်စေသော အစီအရင် လူတို့သည် ရာထူးအပြိုင်အဆိုင်၊ လုပ်ငန်းအပြိုင်အဆိုင်၊ စီးပွားရေးအပြိုင်အဆိုင်၊ တရားတပေါင် အပြိုင်အဆိုင် မှစ၍ အပြိုင်အဆိုင် အမျိုးမျိူး ရှိကြ၏။ ထို့အတူ မိမိအား ရန်လိုသူအမျိုးမျိုး လည်းရှိနိုင်၏။ ဖော်ပြထားသော ဂါထာသည်။ ရှေးလူကြီးများ အသုံးပြုသော အပြိုင်အဆိုင် ကို နိုင်နင်းသည့် ဂါထာဖြစ်၏။ အပြိုင်အဆိုင် မရှိ၍ ရွတ်လျှင် တစ်နေ့လျှင် (၇) အုပ် ရွတ်၍ (၇) ရက်ပြည့်အောင်ရွတ်လျှင် စီးပွားဥစ္စာ တိုးတက်သည်ဟု ရှေးလူကြီးတို့ အမှာရှိ၏။ ဖယောင်းတိုင် (၇) တိုင်တွင်ပတ်၍ (၇) အုပ်မန်းပါ။ (၇) ရက်တိတိ မီးထွန်းပါ။ သင်အလို ရှိသော ဆန္ဒများ ပြည့်စုံသွားပါလိမ့်မည်။ အချိန်မရွေးရွတ်ဖတ်နိုင်စေရန် ဖုန်းထဲမှာ ဆေ့ထားပါ။ ဓာတ်ပုံပရင့်ထုတ်ပြီး အသုံးပြု၍ … Read more
Categories ေဗဒင္ Tags စီးပွားရေ
ဇွန်လအတွက် အညံ့များကင်းဝေးပြီး ငွေများဝင်စေရန် နေ့သားအလိုက် ယတြာ